Google Earth / iimephu-Iphepha 2 -Geofumadas
I-GEarthView yiplagi ebalulekileyo ekuvumela ukuba wenze umbono ohambelanayo wokuhanjiswa kwe-Quantum GIS kuGoogle Earth. Uyifaka njani iplagi ukuyifaka, khetha: Izongezo> Lawula izongezo kwaye uyikhangele, njengoko kubonisiwe kumfanekiso. Nje ukuba iplagi ifakiwe, inokujongwa kwibar yesixhobo.…
Microstation ngqamanisa ne Google Earth
Umhlaba kaGoogle uye wasisixhobo esingenakuphepheka kwiinkqubo zethu zangoku zeemephu. Nangona inezithintelo kunye nesiphumo sokulula kwayo, uninzi lweziphoso luvakaliswa yonke imihla, kwesi sixhobo sinetyala lokuba i-geolocation kunye nokuhamba kwiimephu kuthandwa kakhulu namhlanje ... ke sine ...
cadastre, Google umhlaba / imephu, Microstation-Bentley
Yenza imephu yonyulo eneeFusiontables- kwimizuzu eli-10
Masithi sifuna ukucinga kwimephu, iziphumo zonyulo zoomasipala, ukuze babe nokuhluzwa ngumbutho wezopolitiko kwaye kwabelwane ngawo noluntu. Ngelixa iindlela zincinci zokuyenza, ndifuna ukubonisa umzekelo wokuchaza ukuba unokwenziwa njani ngeeFusionTable ngumsebenzisi oqhelekileyo. Oko sinako:…
I-OkMap mhlawumbi yenye yeenkqubo ezomeleleyo zokwakha, ukuhlela nokulawula iimephu zeGPS. Olona phawu lubaluleke kakhulu: Isimahla. Sonke sinosuku olunye sibonile isidingo sokumisela imephu, ukujonga umfanekiso, ukulayisha ifayile yemilo okanye i-kml kwiGarmin GPS. Imisebenzi enje ngezi ...
Umhlaba ka-Google GPS KML shp
Google umhlaba / imephu, GPS / Izixhobo, Ukuprinta kokuqala
Ngaba ndingasebenzisa imifanekiso yeGoogle Earth ye-cadastre?
Ukuba nexesha elimnandi nomhlobo ongumDatshi namhlanje, ndibonisa ukufana okukhoyo phakathi kwenkqubo yokuba umhlaza ukhokelela kwizengqondo zekliniki kunye nothando lukaGoogle Earth ngeziphelo ezingalunganga: Inqanaba 1: Ukoyikisa. Ingcali iya ebaleni ukuphendula isicelo somlinganiso kumnini ...
cadastre, Google umhlaba / imephu, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
I-gvSIG 2.0 kunye noLawulo loMngcipheko: ii-webinars ze-2 ezizayo
Into enomdla kukuba indlela yokufunda yesiNtu eguquke ngayo, kwaye into eyayifuneka ngaphambili kwigumbi lenkomfa elinobunzima bomgama nendawo, ukusuka kwi-iPad kungangqinwa naphina emhlabeni. Kule meko, kusondele kakhulu ekuphuhliseni ii-webinars ezimbini ekufuneka sonke sizisebenzise, ​​sijonga ukuba ...
Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu, GvSIG
I-Google Earth i-7 imida ukutshintshwa kwezithombe ze-ortho ezilungisiweyo
Xa inguqulelo entsha yePlex. Umhlaba wesi-3 sele uza kukhutshwa, siyaqonda ukuba nangona ixhasa ukulayishwa kweenkonzo zeemephu zewebhu, uncedo olukhulu olwenziweyo ukuza kuthi ga ngoku lube nakho ukukhuphela umfanekiso olungiselelwe weGoogle Earth ... ayizukuba lula kangako. Kungenxa yokuba uGoogle, efuna ukunqanda ...
I-Plex.Earth I-3.0 Iinkonzo zeWMS kwi-AutoCAD
I-Plex.Earth 3.0 ize kum kuqala, endiye ndanexesha lokuyivavanya ngelixa ndichaza umhla wokufumaneka kuhlobo lokugqibela. Ngokunokwenzeka ngenyanga ka-Novemba ka-2012. Ibaleka nge-AutoCAD 2013 Mhlawumbi eyona nto intsha kukuba le nguqulo yenziwe ngokukodwa kwi-AutoCAD 2013, okanye nayiphi na ...
AutoCAD 2013 Umhlaba ka-Google PlexEarth
I-GPS kunye neGoogle Earth ngokuBambisana
Iminyaka emi-4 emva kokuphonononga i-gvSIG kunye nokuBambisana, siyavuya ukukhupha upapasho olutsha oluvela eArnalichm, umbutho weengcali ezenzelwe ukomeleza ifuthe labadlali abanenkxaso yezobuchwephesha, iinkonzo zonxibelelwano noqeqesho kwicandelo lonikezelo lwamanzi okusela kunye Yobunjineli Kwezendalo. Sithetha ...
Umhlaba ka-Google GPS
Ukufundisa i-CAD / GIS, Google umhlaba / imephu, GPS / Izixhobo
Uluhlu lokuthumela kwelinye ilizwe kuGoogle Earth, ukusuka kwi-Excel, kunye nomfanekiso kunye nesicatshulwa esityebileyo
Lo ngumzekelo wendlela i-Excel engathumela ngayo umxholo kuGoogle Earth. Ityala yile: Sinohlu lokudibanisa kwifomathi yendawo yokuhlala (lat / lon). Sifuna ukuthumela kuGoogle Earth, kwaye sifuna ukuba ibonise ikhowudi yenqaku lomdla, isicatshulwa esibhalwe ngqindilili, isicatshulwa esichazayo, ifoto ye ...
Ukulanda, Google umhlaba / imephu
Iindaba ze-4 ezivela kwiGoogle Earth 6.3
Ndikhuphele uguqulelo lwe-beta kaGoogle Earth 6.2.1.6014 kunye nokubonakalisa into endixelelwe ngumsebenzisi, kukho ezinye izinto ezinomdla ezinomdla. Nangona zikho ezinye izinto, ngeenjongo zethu ezi zinto zintsha zibonakala ziluncedo kum; Nangona ezinye zezi zivele kuhlobo 4, kubonakala ngathi ngoku ...
Makhe sijonge imeko: Ndiye endle ndiyokwakha ipropathi, njengoko kubonisiwe kule theyibhile ilandelayo kwaye ndifuna ukuyibona kuGoogle Earth, kubandakanya neefoto ezimbalwa endizithathileyo.Ubuhlakani betemplate kukuba buthatha ifoto enye kuphela: Guqula UTMa yendawo ilungelelanisa kwifomathi yedesimali, njengoko injalo ...
Ukulanda, Okufumaneka, Google umhlaba / imephu
Ngenisa umfanekiso we-Google Earth kwisakhiwo se-ecw
Isidingo: Kufuneka sisebenze i-cadastre sisebenzisa umfanekiso weGoogle Earth kwifomathi ye-georeferenced engasindi. Ingxaki: I-ortho ekhutshelweyo yi-Stitchmaps ikwifomathi ye-jpg, i-georeference ezisa nayo ayixhaswanga yi-Microstation. Isisombululo: Khuphela umfanekiso kunye neStitchmaps, ungqamanisa uGoogle Earth neMicrostation yokungenisa ukubanjwa okungqinelanayo ...
Iiphotography, Google umhlaba / imephu, Microstation-Bentley
I-Plex.Earth ukulanda imifanekiso esuka kwiGoogle Earth Ngaba akukho mthethweni?
Siye sabona ngaphambi kweenkqubo ezithile ezikhutshelwe imifanekiso kuGoogle Earth. Ukuchazwa kwangaphambili okanye akunjalo, ezinye azisekho njengeStitchMaps kunye neGoogleMaps Downloader. Ngenye imini umhlobo wandibuza ukuba yintoni eyenziwa nguPlex.Earth evela kwi-AutoCAD ephula imigaqo-nkqubo kaGoogle okanye hayi. Ithini imiqathango kaGoogle http://earth.google.com/intl/es/license.html (c) la…
AutoDesk Umhlaba ka-Google PlexEarth
Umhlaba, umzekelo olungileyo wokungena kwimakethi yaseSpain
Ukuza kuthi ga ngoku kusungulwe inguqulelo yeSpanish yephepha lePlexScape, ngaphandle kohlobo lwayo lwesiGrike olwalukho ngesiNgesi nangesiFrentshi. Kubonakala ngathi kungumqondiso obalulekileyo, apho sibonileyo kubonakala ngaphambili, kuba iPlex.Earth ngaphakathi kweelwimi ezingaphezulu kwe-10 sele ibandakanyiwe iSpanish kwinguqulo 2.0.…
Izifundo ze-GIS ezikwi-Intanethi, ngeSpanish, ezinye zisimahla
Uqeqesho lweGeospatial yinkampani ezinikele kuqeqesho kwimicimbi yenkqubo esetyenzisiweyo kwiiNkqubo zoLwazi lweJografi. Kutshanje iqalile ukufikelela kuluntu oluthetha iSpanish, ngezifundo ezifanayo kunye nabahlohli abachaphazelekayo kwindalo esingqongileyo. Phakathi kwezibonelelo zoQeqesho lweGeospatial, ngaphandle kwento yokuba iikhosi ngoku zinokufunyanwa ngeSpanish zezi:
ESRI Umhlaba ka-Google
Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu
I-Geofumadas ... 2 wikileaks phambi kwe2011
Ndineentsuku ezintathu kuphela de kuphele u-2011, ndinikwe igunya lokunxibelelana noko ngezi ndaba zimbini eziza kutshintsha ubomi bethu ngo-2012: 1. IMicrosoft ithenge iBentley Systems. Njengoko kuviwe, iMicrosoft ifikelele kwisivumelwano sokugqibela sokufumana eyona nto iphambili kwiiNkqubo zeBentley ezifikelelwe kwiZibonelelo zeBentley 500; ixabiso…
AutoCAD-AutoDesk, Google umhlaba / imephu, Microstation-Bentley, egeomates My
Ngexesha elithile eladlulayo bendithetha ngePlex.Earth Izixhobo zeAutoCAD, isixhobo esinomdla ngaphandle kokungenisa elizweni, ukutyobela imifanekiso eneefoto ezichaziweyo kunye nokwenza ikhompyuter ngokuchanekileyo, inokwenza neendlela eziqhelekileyo kwindawo yophando. Ngeli xesha ndifuna ukubonisa ukuveliswa kwemigca ye-contour evela kuGoogle Earth. Mhlawumbi inyani yokuba ...
AutoCAD-AutoDesk, Okufumaneka, Google umhlaba / imephu, Topography
Ikhasi langaphambili Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 ... Page 13 kwiphepha elilandelayo